ZEC Yoshanda neUnited Nations Kudzidzisa Vanhu Sarudzo dza2018
Sangano reZimbabwe Electoral Commission, ZEC, richishanda nesangano reUnited Nations Development Program rinoti rave kutanga chirongwa chekudzidzisa vanhu nezvesarudzo dzegore rinouya uye vanenge vachida kuita basa iri vakasununguka kuuya nezvavanoda kuita muzvirongwa izvi vachikwikwidzana nevamwe.
Izvi zvaburitswa pachena nasachigaro weZEC, Amai Rita Makarau.
Mapato anopikisa uye masangano anoongorora sarudzo akaita seZimbabwe Election Support Network neElection Resource Centre anoti dzidziso iyi yatononoka kutanga uye vanhu vakawanda munguva yesarudzo vanoratidza kuti vanenge vasina kudzidziswa zvakakwana nezvesarudzo.
Masangano aya anoti vechidiki vakawanda havasi kuvhota zvichikonzerwawo nenyaya yekuti hapana dzidziso yakakwana nezvekodzero yekuvhota.
ZEC inoti inoda mari inosvika mamiriyoni mazana maviri nemakumi manomwe nemana emadhora yekuti iite sarudzo dzemuna 2018.
Zvichakadaro, sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti riri kushora zvikuru zviri kuitwa nedare repamusoro reSupreme Court zvekutadza kupa zvikonzero zvekuramba kutambira nyaya yekuti vanhu vari kunze kwenyika vawaniswe mukana wekuvhota.
Muna 2012 VaTavenga Bukaibenyu vakakwidza kudare nyaya yekuti vari kunze vatenderwe kuvhota.
Nyaya iyi yakazeyiwa nedare muna 2013 uye dare rakaramba kutambira chikumbiro ichi rikati richazopa zvikonzero zvacho.
Asi kusvika parizvino kwapera makore mashanu dare iri harisati rapa zvikonzero.
Crisis in Zimbabwe inoti inotarisira kuti matare asapedze makore asina kupa zvikonzero zvemitongo yaanenge atura uye kunonoka kwakadai kutyora bumbiro remutemo zvinopawo kuti vanhu vashaye chivimbo nematare.
Amai Makarau vari kushandisa mutongo uyu kutsika madziro panyaya yekuti vari kunze vavhote muna 2018.